2 Ndị Eze 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Eze nke Abụọ 5:1-27
Ịlaịsha gwọrọ Neeman ekpenta ọ na-arịa (1-19)
Gehezaị rịawara ekpenta maka na ọ dị anyaukwu (20-27)
5 E nwere otu nwoke aha ya bụ Neeman. Ọ bụ onyeisi ndị agha eze Siria, bụrụkwa onye a ma ama, onye eze Siria na-anaghị eji egwu egwu, n’ihi na Jehova si n’aka ya mee ka ndị Siria merie ndị iro ha.* Nwoke a bụ dike n’agha, ọ bụ eziokwu na ọ bụ onye ekpenta. 2 N’otu oge ndị Siria bịara agha n’Izrel, ha dọọrọ otu nwatakịrị nwaanyị n’agha, nwa ahụ emechaa na-agbara nwunye Neeman ohu. 3 Nwatakịrị ahụ gwara nne ya ukwu otu ụbọchị, sị: “A sị nnọọ na onyenwe m ga-ejisi ike gaa hụ onye amụma+ nọ na Sameria, ọ ga-agwọ ya ekpenta na-arịa ya.”+ 4 A* gara kọọrọ onyenwe ya ihe nwatakịrị nwaanyị ahụ si Izrel kwuru. 5 Eze Siria asị Neeman: “Jikere ka ị gawa. M ga-enye gị akwụkwọ ozi ị ga-enye eze Izrel.” Ya emechaa gawa, were talent* ọlaọcha iri na puku mkpụrụ ọlaedo isii (6,000), chịrịkwa uwe ọhụrụ iri. 6 O nyere eze Izrel akwụkwọ ozi ahụ. Ihe e dere na ya bụ: “Eziteere m gị akwụkwọ ozi a, zitekwara gị Neeman, bụ́ onye na-ejere m ozi, ka ị gwọọ ya ekpenta na-arịa ya.” 7 Ozugbo eze Izrel gụrụ akwụkwọ ozi ahụ, ọ dọwara uwe ya, sị: “Àbụ m Chineke, onye ọnwụ na ndụ dị n’aka?+ O ziteere m nwoke a ka m gwọọ ya ekpenta na-arịa ya. Ọ̀ kwa unu ahụla otú o si na-achọ m okwu?” 8 Ma ozugbo Ịlaịsha, bụ́ onye nke ezi Chineke, nụrụ na eze Izrel dọwara uwe ya, o ziri eze ozi, sị: “Gịnị mere i ji dọwaa uwe gị? Biko, gwa ya ka ọ bịa hụ m, ka ọ mara na onye amụma nọ n’Izrel.”+ 9 Neeman wee gbara ịnyịnya ya na ụgbọ agha ya bịa guzoro ebe e si abanye n’ụlọ Ịlaịsha. 10 Ma, Ịlaịsha ziri mmadụ ka o zie ya, sị: “Gaa mikpuo onwe gị ugboro asaa+ n’Osimiri Jọdan.+ Ahụ́ ga-adị gị mma, ị ga-adịkwa ọcha.” 11 Ihe a kpasuru Neeman iwe, ya alawa, sị: “M nọ na-eche na ọ ga-apụta, bịa guzoro ebe a, kpọkuo aha Jehova bụ́ Chineke ya, fegharịa aka ya ihu na azụ, ekpenta na-arịa m alaa. 12 Ọ̀ bụ na osimiri Abena na Fapa, ndị dị na Damaskọs,+ akaghị mmiri niile dị n’Izrel mma? Ọ̀ bụ na mụ enweghị ike imikpu onwe m na ha, dịkwa ọcha?” Ọ tụgharịziri jiri iwe lawa. 13 Ndị na-ejere ya ozi bịara gwa ya, sị: “Nna anyị ukwu, a sị na ọ bụ oké ihe ka onye amụma ahụ gwara gị mee, ọ̀ bụ na ị gaghị eme ya? Ma, naanị ihe ọ sịrị gị mee bụ ịga mikpuo onwe gị na mmiri ka ị dị ọcha.” 14 O wee gaa mikpuo onwe ya ugboro asaa n’Osimiri Jọdan otú onye nke ezi Chineke kwuru,+ ya adị ọcha,+ akpụkpọ ahụ́ ya abịa dịrị ka akpụkpọ ahụ́ nwata.+ 15 Ya na ndị niile so ya gaghachikwara na nke onye nke ezi Chineke,+ ya eguzoro n’ihu ya, sị: “Amatala m ugbu a na e nweghị Chineke n’ebe ọ bụla n’ụwa ma e wezụga n’Izrel.+ Ugbu a, biko, nara ohu gị onyinye* a.” 16 Ma, Ịlaịsha sịrị: “Eji m Jehova, bụ́ Chineke dị ndụ, onye m na-efe,* na-aṅụ iyi na agaghị m anara ya.”+ Ọ nọkwa na-arịọsi ya ike ka ọ nara ya. Ma, Ịlaịsha jụwapụrụ isi. 17 N’ikpeazụ, Neeman sịrị: “Biko, ọ bụrụ na ị gaghị anara ya, ka e si n’ala a kponye ohu gị ájá jakị abụọ ga-ebuli, n’ihi na ohu gị ga-akwụsị ịna-achụrụ chi ọzọ àjà, ma nke a na-esu ọkụ ma nke nkịtị. Naanị onye m ga na-achụrụ àjà bụ Jehova. 18 Ka Jehova gbaghara ohu gị mmehie a: Ọ bụrụ na onyenwe m eze agaa n’ụlọ* Rimọn ka ọ kpọọ isiala, ya adabere n’aka m, nke ga-eme ka m kpọọ isiala n’ụlọ Rimọn, biko, ka Jehova gbaghara ohu gị.” 19 Ịlaịsha asị ya: “Laa n’udo.” Ya alawa. Mgbe ọ gatetụrụ aka, 20 Gehezaị,+ onye na-ejere Ịlaịsha onye nke ezi Chineke+ ozi, ekwuo n’obi ya, sị: ‘Nna m ukwu ahapụla Neeman+ onye Siria a n’anaraghị ya ihe o wetara. Eji m Jehova, bụ́ Chineke dị ndụ, na-aṅụ iyi na m ga-achụwa ya ma nata ya ihe.’ 21 Gehezaị wee chụwa Neeman. Mgbe Neeman hụrụ onye chụ ya na-abịa, o si n’ụgbọ ịnyịnya ya rịdata ka ya na ya hụ. Ọ jụkwara ya, sị: “Ọ̀ dịkwa ná mma?” 22 Ya asị: “Nsogbu adịghị. Nna m ukwu ziri m ka m gwa gị, sị, ‘Ụmụ okorobịa abụọ bịara na nke m ugbu a. Ha bụ ụmụ ndị amụma. Ha si n’ala Ifrem bụ́ ugwu ugwu. Biko, nye m otu talent ọlaọcha na uwe ọhụrụ abụọ ka m nye ha.’”+ 23 Neeman asị: “Ngwanụ, were talent abụọ.” Ọ nọ na-arịọsi ya ike,+ werekwa talent ọlaọcha abụọ na uwe ọhụrụ abụọ tinye n’akpa abụọ, bunye ha mmadụ abụọ n’ime ndị na-ejere ya ozi, ka ha buru ha na-aga n’ihu ya. 24 Mgbe Gehezaị ruru Ofel,* ọ naara ha ihe ndị ahụ, dowe ha n’ụlọ ya, ma gwa ndị ahụ ka ha lawa. Mgbe ha lawara, 25 ọ lọtara gaa guzoro n’akụkụ nna ya ukwu. Ịlaịsha asị ya: “Gehezaị, olee ebe i si?” Ma ọ sịrị: “Onye na-ejere gị ozi agaghị ebe ọ bụla.”+ 26 Ịlaịsha asị ya: “Ì chere na mụ amaghị mgbe ị chụụrụ nwoke ahụ gawa, ya esi n’ụgbọ ịnyịnya ya rịdata ka gị na ya hụ? Ugbu a ọ̀ bụ oge ịnara ọlaọcha ma ọ bụ ịnara uwe ma ọ bụ ubi oliv ma ọ bụ ubi vaịn ma ọ bụ atụrụ ma ọ bụ ehi ma ọ bụ ịkpọrọ ụmụ nwoke na-eje ozi ma ọ bụ ụmụ nwaanyị na-eje ozi?+ 27 Ugbu a, ekpenta na-arịabu Neeman+ ga-arịawazi gị na ụmụ gị ruo mgbe ebighị ebi.” Ọ pụrụ ozugbo ahụ ghọọ onye ekpenta, na-acha ọcha ka snoo.+
^ Ma ọ bụ “napụta ndị Siria n’aka ndị iro ha.”
^ O nwere ike ịbụ Neeman.
^ Na Hibru, “ngọzi.”
^ Ma ọ bụ “n’ụlọ arụsị.”
^ Ofel bụ aha otu mpaghara na Sameria. O nwere ike ịbụ ugwu ma ọ bụ ebe a rụsiri ike.
2 Ndị Eze 5